SHCHITOVKI: CALIFORNIYA, WADANKA, MULBERRY, GEEDKA IYO NOOCYADA KALE, IYO SIDOO KALE SAWIRRADA CAYAYAANKA IYO FENOKLENDAR - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada miisaanka: Californiya, mulberry, comma iyo kuwa kale. Macluumaad guud iyo sawiradooda
Shchitovka waa qoys ka mid ah hornbills. Cayayaankaasi waxay leeyihiin nooc u gaar ah sababtoo ah xaqiiqda ah in jinsi ahaanshaha jinsiga gabi ahaanba aan horumarin. Labada qof ee qaangaarka ah iyo kuwa dirxiga ah waxay leeyihiin saameyn taban oo ku saabsan dhirta: waxay nuugaan juuska, taas oo keenta dhimashadooda. Dheeraad ah waxaan ka sheekeyn doonaa noocyada cayayaanka, oo ay ku jiraan gaashaan been ah.
Qoyska uu kudhaco bukaan-socodka waa pseudococcides. Qaraabada ugu dhow ee cayayaankani waa ilaaliye been ah. Waxay ka tirsan yihiin isla qooyska - coccid. Labadan nooc ayaa ah cayayaanka, waana suurtagal in la kala saaro marka hore aragga. Wixii aqoonsi sax ah ee cayayaanka, waa inaad ka saartaa dhirta.
Shchitovki kuwaas oo aan ku jirin qaabka gaashanka, sababtoo ah ma aha qayb ka mid ah jirkooda. Badanaa markaad ka baxdo cayayaanka dhirta, marka hore waxaad ka saartaa gaashaankiisa, xayawaankuna wuxuu ku sii jirayaa geedka wuxuuna sii wadaa inuu waxyeelo u geysto. Haddii aad la shaqeyneyso gaashaan been ah, markaa xaaladdu waxay u jeesanaysaa qaab waxoogaa ka duwan. Markaad sii wadi karto maqaarkan, waxaa isla markiiba laga saari doonaa dhammaantood.
Cabbirrada dabeecadda ee dabiiciga ah waxaa matalaya tiro aad u tiro badan oo noocyada kala duwan ah. Haddii Fiiso-dhaqameedka uu waayo-aragnimo u leeyahay, wuxuu ku dhowaadaba ku ogaan doonaa bukaan-socodka dhirta isla markaana bilaabi doona isla markiiba si uu u isticmaalo tallaabooyin waxtar leh.
Qoraalka. Jidhka laftiisa ayaa lagu dabooli karaa gaashaan gaar ah oo dhir ah, ilaa 5 millimitir. Farqiga taargooyinkani way kala duwanaan karaan, labadaba dherer ahaan iyo ballacaba.
Noocyada noocan oo kale ah waxay ku dhufanayaan iyagoo dhigaya ukunta. Laakiin weli dabiiciga waxaa ku jira nooc kale oo shchitoviki viviparous ah. Dumarku waxay ku noolaan karaan dhowr bilood waxayna dabooli karaan ukumaha oo dhan. Isla mar ahaantaana, ragga ka mid ah cayayaanka ayaa leh nolol ballaadhan. Laakiin isla waqtigaas, raggaasi waxay leeyihiin nolol gaaban, kuwaas oo gaaraya maalmo yar.
Laga soo bilaabo dhedigayaasha si ay u diraan dirxiga, dhamaan bini-aadminnimada ayaa saameyn aad u xun ku leh dhirta gaarka ah. Sababta ay u nuugaan juuska, waxay ka qaadaan dhammaan waxyaalaha ku jira maadooyinka muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah macaawinooyinka (waxaad ka akhrisan kartaa sababaha muuqaalka kashaqaynta guriga iyo sida looga hortago halkan). Maqnaanshaha dhammaan qaybaha dhirta ayaa keenaya xaqiiqda ah in dhimashadu dhacdo.
Warshad ay waxyeeleeyeen cayayaanka ayaa lumiya midabkiisa oo dhoobo. Caleemaha qallajiya oo gebi ahaanba joojiya koritaanka. Cayayaanka noocan ah ee xaaladaha badankood waxay doorbidaan timirta ama geedaha liinta.
Noocyada iyo sawiradooda
Tixgeli dhammaan noocyada gaashaanka ah ee jira iyo muuqaalkooda.
Noocyada cayayaanka ayaa si gaar ah loogu qaybiyaa gobollada koonfureed, iyo sidoo kale Bariga Fog. Gaashaanka nooca Kaliforniya wuxuu saameeyn karaa ilaa 200 nooc oo dhir ah oo ka soo baxa alwaax. Dhirta miraha, sida pear, tufaax, malab, xajiin, waxay ku haboon yihiin inay dhadhamaan.
Sida laga soo xigtay fenoklendar, jiilaalka meel u dhow shchitovka Californian qaadataa meel on jilif ee geed ah foomka dirxiga. Guga, dirxigooda ayaa koraan oo u beddelaa dumarka ama ragga. Dirxiga qudhooda waxay leeyihiin gaashaan ay ka kooban yihiin. Marxaladda koowaad, waxay leedahay midab cad, ka dibna midabku wuu isbeddelayaa oo wuxuu noqonayaa midab. Geedaha ay saameeyeen cayayaankaasi waxay si dhaqso ah u noqdaan kuwo daciif ah oo jilifkoodu jilicsan yahay.
Fiiri fiidiyoowga gaashaanka California:
Labada dirxiga iyo dheddigga ee shchitovki bukaanku waxay awoodaan inay horumariyaan ayna koraan si gaar ah caleemaha dhuuban ama laamo. Badanaa, cayayaanka kaliya ee dheddigga ah waxay ku koraan laanta koritaanka dhirta, laakiin ragga horeba waxay ku nool yihiin laanta hoose. Iyadoo ku saleysan tan, caleemaha dhalinyarada iyo khafiifka ah waxay la xiriiraan oo keliya dumarka.
Haddii ay jiraan cayayaanka badan ee dabiiciga ah ee geedkan, waxay ku daboolaan xab xabsi ah., sababtoo ah geedku wuxuu noqonayaa sida bjørk.
Gaashaanka dabeecada jilicsan ee la midka ah ayaa ah noocyo cayayaan yar oo cayayaanka ah.
Caawin Cayayaanka Tani waa sidoo kale tiro badan oo ah dalagyada beeraha. Laakiin inta badan noocan ah waxaa laga heli karaa aagga geedo midho leh, iyo gaar ahaan - geedo tufaax ah.
Gaashaanka qaab-dhismeedku wuxuu leeyahay jirka ilaa hal iyo badh mitir dheer. Jidhkani wuxuu ku jiraa gaashaan, taas oo ah laba jeer dhererka jirka.
Gabadhu waxay leedahay midab madow ah oo gaashaan ah, ragga waa u fududahay. Isla mar ahaantaana, haweenku waxay hayn karaan ilaa 90 ukum, geeddi-socodkani wuxuu dhacaa bisha Agoosto iyo inta badan caleemaha geedaha yar yar. Kadib dhamaadka jiilaalka, baalmarka dirxiga iyo isbeddelka ku faafa laamaha kala duwan. Sidaa darteed, jiil cusub oo cayayaanka ah oo nuugaya soodhaha geedka.
Palm shchitovka waxay leedahay magaceeda sababtoo ah xaqiiqda ah in ay waxyeellayso tiro badan oo dhir ah, laakiin asalkoodu yahay timirta. Gabadka haweenka ee noocyada noocaan ah waxay leeyihiin midab cad, iyo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay noqoto mid cagaaran. Ragga wuxuu leeyahay midabka jaalaha ah isla waqtigaas.
Cayayaanka noocan ahi waxay ku yaalaan meelaha lakabka hoose ee caleen. Haddii ay weeraraan warshad geedka, waxay ku dhuftaan caleen, wayna soo baxdaa.
Cayayaanka la jeexjeexay ayaa ah asal ahaan Yurub. Ujeedada cayayaanka noocan oo kale ah waa dhirta miraha miro ama miro dhagax. Cayayaanka noocan oo kale ah wuxuu ka duwanyahay kuwa isku midka ah ee ka dib markii lagu guul dareysto uurjiifka, dhibbanaha wuxuu soo geshaa midabaynta qaabka casaanka.
Gaashaanka dabeecada ayaa saameyn ku leh dhirta citrus oo keliya. Waxaad la kulmi kartaa iyada oo kaliya on liin, liin, rummaanka iyo roodhida.
Waa muhiim! Qiyaasta liinta ayaa ah cayayaan khatar ah waxayna saamayn ku yeelanaysaa dhaqanka liinta. Cayayaanka noocan oo kale ah waxay keeni kartaa in la iska dhaafo midhaha geedka iyo caleemaha, ama xitaa dhamaystirkeeda.
Calanka noocaan ah waa yar yahay, illaa laba milimitir. Dumarka noocan ah waxay leeyihiin qaab jidh oo wareegsan. Sida ragga ah, gaashaankiisu wuxuu leeyahay dabeecad guri. Badanaa muuqaalkani wuxuu leeyahay midab guduudan ama midab madow, laakiin sidoo kale waxaa jira jaalle.
Cayayaanka qaangaarka ah ee ragga waa kuwo yaryar oo leh laba baal oo kaliya. Waxay ku nool yihiin wax aan ka badnayn lix saacadood, waxayna u dhintaan ka dib markii laysku daro. Dumarka aan dheddigga lahayn waa ragu leh naas naadir ah, oo ah feeraha.
Sannad kaste, cayayaanka noocaan ah wuxuu soo saari karaa wax ka badan siddeed jiil iyo wax ka yar afar. Noocadani waa mid si khaas ah loo yaqaan "viviparous". Celcelis ahaan, qiyaastii 70 canug ayaa laga tirin karaa dhalashada.
Pine shchitovka waxaa loola jeedaa sida xakamaynta sida kan cantala. Faafidda nooca scytology waxay saameysaa aagga kaynta-kore iyo steppe. Dirxiga ee shchitovki sida awood u leh in la dhufto pines iyo duufaan, taas oo mustaqbalka abuuraya qalajinta dalagyadaas.
Caawin Si loola dagaallamo cayayaanka, waa lagama maarmaan in la aqoonsado sida ugu dhakhsaha badan. Waxaa ugu wanaagsan in lagula dagaallamo cayayaanka kuwaas oo caawimaad ka helaya sunta cayayaanka, tusaale ahaan, Aktara.
Habkani wuxuu ku habboon yahay xilliga xagaaga marka haweenku quudiyaan dhalashada jiil cusub.
Shchitovka jilicsan ayaa waxyeelo badan oo dhirta kala duwan. Dhererka jidhkiisu wuxuu noqon karaa ilaa afar millimitir. Habka dhalmada ee cirifka jilicsan waa viviparous.
Ilaaliyaha ilaaliya - waa maxay?
Mishiinka waa scythe ah oo aan lahayn qolof cayn ah. Sida ilaalinta ukunta iyo dirxiga, shaqadan waxaa sameeya maqaarka, kaas oo ku dhinta dumarka.
Wax kastoo shitovka ahaa ma aha, waxay ku dhejisaa waxyeelo weyn oo geedka. Si loola dagaallamo waxay u baahan tahay aqoon iyo mararka qaarkood khibrad (sida loola macaamili karo gaashanka leh daaweynta dadweynaha iyo diyaarinta diyaar-garowga ah waxaa laga heli karaa arrintan). Waa mid aad u muhiim ah in la cayimo cayayaankan horey u marinta horumarinta, kiiskana daaweyntu waxay noqon doontaa mid sahlan.